चाडबाड आउनै लाग्दा घट्न थाल्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको बजार भाउ ! – ताजा समाचार
चाडबाड आउनै लाग्दा घट्न थाल्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको बजार भाउ !
बुधबार स्थिर रहँदै सुन तोलाको ७२ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, आज चाँदी बिहीबार तोलामा ५ रुपैयाँ घटेको छ । आज चाँदी ५ रुपैयाँ घटेर तोलाको ८ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदीको मूल्य ८ सय ८० रुपैयामा कारोबार भइरहेको थियो ।
आम नागरिकहरु सुनको मुल्य बढेपनि बेच्दा आफूले उचित रकम नपाउने गुनासो गरिरहेका छन् । न्यूरोडमा सुन बेच्न आएको एक महिला भन्छिन् । आफूले सुन किन्दा मेकिङ्ग चार्ज भनेर सुनको मुल्य भन्दा १५ प्रतिशत बढी रकम तिर्नुपर्छ । त्यही सुन बेच्न आउँदा प्रतितोला ५ देखि ७ हजार कम मुल्यांकन हुन्छ भने ज्याला र जर्तिको पैसा पनि पाइदैन । सुन व्यवसायीहरुलाई सुन बेच्दा नाफा हुन्छ भने पुरानो सुन किन्दा झनै बढी नाफा हुन्छ ।
यसबारे को स्टोरी पढ्नुहोस्